Hey,adaha u dooda xuquuqda aadanaha oo dhaliil u jeediyay mada... | Universal Somali TV
Hey,adaha u dooda xuquuqda aadanaha oo dhaliil u jeediyay madaxweynaha Filabiin
Madaxweynaha Filabiin Rodrigo Duterte ayaa ku amray sargaal sare oo ka tirsan ciidanka booliska in uu si deg deg ah u bilaabo howlgalada kooxaha ka ganacasada daroogada looga sifeynayo jasiirada ku taal bartamaha Negros.
Mr Rodrigo ayaa Khudbad uu ka jeediyay shirka hogaamiye-yaasha ganacsiga ee magaalada Manila habeenimadii xalay ayaa ku amray taliyaha cusub ee jasiirada Bacolod, Janaraal Jovie Espenido in qaado howlgalo lagu ciribtirayo kooxaha Daroogada.
Madaxweyne Duterte oo ku caanbaxay ciribtirka burcada intii uu xilka qabtay ayaa ugu baaqay taliyaha uu u magacaabay Jasiiradan in toogasho uu ku dilo kooxaha burcada hadii uu Arko.
Bacolod waxay noqotay meel caan ku ah daroogada waxaana u magacaabay taliye Espenido, in uu hogaamiyo ciidanka booliska ee Jasiirada, waxaana uu xor u yahay in uu toogto kooxaha ka ganacsada daroogada.
Jasiirada Bacolod ayaa dad ku nool waxay tiradoodu gaareysaa inkabadan 560,000 oo Ruux.
Dhanka kale amarkaan ayaa waxaa canbaareeyay Jimcaha maanta madaxa hey,ada u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights ee dalka Filibiin Mr Karen Gomez Dumpit, waxaana uu sheegay in hadalka madaxweynaha uu xadgudub ku yahay xuquuqda Aadanaha.
Kan-xigaPuntland oo soo jeedisay in la xaliyo...
Kan-horeDowlada Kenya oo heegan galisay ciida...
54,067,075 unique visits